နာရီပိုင်းအတွင်းမှာ အားပေးကြည့်ရှုသူ ပရိသတ် သန်းနဲ့ချီရှိခဲ့တဲ့ ဘန်ဂျမင်ရဲ့ ဒုတိယမြောက် သီချင်း အသစ်လေး – Suehninsi
မနေ့က သြဂုတ်လ (၁၈)ရက်နေ့လေးမှာတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် ဘင်ဂျမင်ဆုမ်းရဲ့ ဒုတိယမြောက်သီချင်းလေးဖြစ်တဲ့ “ဟိုဘက်အိမ်က ကောင်မလေး” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးထွက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ဘင်ဂျမင်ရဲ့ ဒုတိယမြောက်ထွက်ရှိလာတဲ့ သီချင်းလေးကို ပရိသတ်တွေလည်း
နားဆင် ကြည့်ရှုခံစားပြီးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ သီချင်းလေးရော သရုပ်ဆောင်မှုမှာပါ အပြစ်ပြောစရာမရှိဘဲ ပရိသတ်တွေသဘောကျနေခဲ့တဲ့ ဒီသီချင်းလေးကတော့ ထွက်ရှိလာခဲ့ပြီး နာရီပိုင်းအတွင်းမှာတင် ကြည့်ရှုသူ သန်းနဲ့ ချီတဲ့အထိရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ဘင်ဂျမင်ကလည်း
အခုလို သူ့ရဲ့သီချင်းလေးကို အားပေးကြတဲ့အတွက် “1 Mill in 15 Hrs. We didanew Summer MV record again. Big thanks to Ma Naw Phaw Eh Htar Naw Phaw Eh Htar(the actress) for everything and especially for introducing me with Ma Snow Miley (the director). Thanks to the whole Team. Thanks
to the Composer and the Musicians and ofcourse the Harmonies. This is all about Summers. Thank You Loves. ” လို့ ပရိတ်တွေနဲ့ သီချင်းလေးဖြစ်မြောက်လာအောင်ကူညီပေးကြတဲ့ သူတွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်း သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ ဖော်ပြထားပါသေးတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ။
မနကေ့ သွဂုတျလ (၁၈)ရကျနလေ့ေးမှာတော့ ပရိသတျတှရေဲ့အခဈြတျော ဘငျဂမြငျဆုမျးရဲ့ ဒုတိယမွောကျသီခငျြးလေးဖွဈတဲ့ “ဟိုဘကျအိမျက ကောငျမလေး” ဆိုတဲ့ သီခငျြးလေးထှကျရှိလာခဲ့ပါတယျ။ ဘငျဂမြငျရဲ့ ဒုတိယမွောကျထှကျရှိလာတဲ့ သီခငျြးလေးကို ပရိသတျတှလေညျး
နားဆငျ ကွညျ့ရှုခံစားပွီးကွမယျလို့ထငျပါတယျ။ သီခငျြးလေးရော သရုပျဆောငျမှုမှာပါ အပွဈပွောစရာမရှိဘဲ ပရိသတျတှသေဘောကနြခေဲ့တဲ့ ဒီသီခငျြးလေးကတော့ ထှကျရှိလာခဲ့ပွီး နာရီပိုငျးအတှငျးမှာတငျ ကွညျ့ရှုသူ သနျးနဲ့ ခြီတဲ့အထိရှိနခေဲ့ပါတယျ။ ဘငျဂမြငျကလညျး
အခုလို သူ့ရဲ့သီခငျြးလေးကို အားပေးကွတဲ့အတှကျ “1 Mill in 15 Hrs. We didanew Summer MV record again. Big thanks to Ma Naw Phaw Eh Htar Naw Phaw Eh Htar(the actress) for everything and especially for introducing me with Ma Snow Miley (the director). Thanks to the whole Team. Thanks
to the Composer and the Musicians and ofcourse the Harmonies. This is all about Summers. Thank You Loves. ” လို့ ပရိတျတှနေဲ့ သီခငျြးလေးဖွဈမွောကျလာအောငျကူညီပေးကွတဲ့ သူတှကေိုကြေးဇူးတငျကွောငျး သူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာကနေ ဖျောပွထားပါသေးတယျ ပရိသတျကွီးရေ။
Source : Benjamin Sum’s Facebook
ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးရဲ့ မင်းသားစာရင်းမှာ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် မပါဝင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း ပြောပြခဲ့တဲ့ ရဲလေး